Fivoriamben’ny Vondrom-paritry ny Vavolombelon’i Jehovah | JW.ORG | Tenin’ny Tanana Malagasy (TTM)
Fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah 2020
Asaina ianao hijery ny fivoriamben’ny vondrom-paritra telo andro ataon’ny Vavolombelon’i Jehovah. Alefa ao amin’ny jw.org ny fandaharan’ny fivoriambe amin’ity taona ity satria miparitaka be ny coronavirus (COVID-19). Hivoaka tsikelikely mandritra ny volana Jolay sy Aogositra ilay fandaharana.
HISONGADINA AO IRETO:
Fandaharana Zoma: Ho hitanao ao hoe misy zavatra azon’ny lehilahy, vehivavy, ray aman-dreny, ary ankizy atao mba hahafinaritra azy ny miaraka amin’ny fianakaviany, dia mba ho faly izy mianakavy. Hohazavaina ao koa hoe tian’Andriamanitra ho faly isika matoa izy namorona ny zavaboary. Nataony afaka mankafy azy ireny koa isika.
Fandaharana Asabotsy: Fa maninona ny Vavolombelon’i Jehovah no mitory maneran-tany an’ilay vaovao mahafaly ao amin’ny Baiboly? Hisy lahateny sy fanadinadinana ary video hanazava hoe nahoana izahay no mitory sy mampianatra Baiboly.
Fandaharana Alahady: Mampanantena ny Baiboly hoe ny fitahian’Andriamanitra no “mampanan-karena ary tsy ampiany fahoriana izany.” (Ohabolana 10:22) Jereo ilay lahateny ara-baiboly hoe “Afaka ny Hanan-karena Ianao Sady Tsy Hijaly” dia ho hitanao hoe nahoana no azo antoka izany fampanantenana izany.
Tantara Ara-baiboly: Tantarain’ny Baiboly hoe be herim-po sy nazoto niasa i Nehemia. Inona no ianarantsika avy amin’izay nataony? Jereo ao amin’ilay fandaharana asabotsy sy alahady ilay tantara misy fizarana roa hoe “Ny Fifaliana avy Amin’i Jehovah no Fiarovana Mafy ho Anareo.”—Nehemia 8:10.
TSY MILA MAMORONA KAONTY
Hijery Fivoriamben’ny Vondrom-paritra
Fandaharan’ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra 2020
Soratra Fandikana sary sy soratra Fandaharan’ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra 2020
Video Fandikana video Fandaharan’ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra 2020
Hizara Hizara Fandaharan’ny Fivoriamben’ny Vondrom-paritra 2020
Fivoriamben’ny Vavolombelon’i Jehovah 2020: Mifalia Foana!
Inona no hanampy anao ho faly na dia mafy aza ny fiainana?
Video Fampahafantarana: Nehemia: “Ny Fifaliana avy Amin’i Jehovah no Fiarovana Mafy ho Anareo”
Jereo ato ny ampahany kely amin’ilay filma ara-baiboly momba an’i Nehemia. Nisy nanohitra i Nehemia rehefa nanorina ny mandan’i Jerosalema sy nanampy ny olona hifandray tsara amin’i Jehovah indray. Dia ahoana no nataon’i Nehemia? Ho hitanao any amin’ny fivoriamben’ny vondrom-paritry ny Vavolombelon’i Jehovah eny akaikinareo io filma io.